GNOME 3.16 ၏အကျဉ်းချုပ် Linux မှ
GNOME ၃.၁၆ ၏အကျဉ်းချုပ်
** GNOME ** သည် GNU / Linux ရှိအကောင်းဆုံး desktop ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်း၎င်းတွင်ကောင်းသောအရာများစွာရှိသည်သာမကကျွန်ုပ်တို့၌မကောင်းသောအရာများပါ ၀ င်ကြောင်းဝန်ခံခြင်းကိုမရပ်တန့်ပါ။
အယူအဆကတော့ GNOME ကိုမပစ်ပယ်ဖို့ပါ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်သာဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏အရသာသည်ကျန်သူများနှင့်မတူပါဟူသောအတွေးမှကျွန်ုပ်တို့စတင်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းသောအရာများနှင့်ဆိုးသောအရာများကိုတတ်နိုင် သ၍ ဘက်မလိုက်ရန်ကြိုးစားခြင်းကိုတွေ့မြင်ရမည်။
clueless တစ်စုံတစ် ဦး ကိုအစဉ်အမြဲရှိကွောငျးတဖန်ငါရှင်းလင်း: ဤသူကားငါ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအမြင်
ငါသည်လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်အတွင်း ** GNOME Shell ** ကိုအနည်းငယ်စမ်းသပ်နေပြီး၎င်း၏ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးသောအရာများကိုအသိအမှတ်ပြုလာနိုင်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီသော်လည်းဤဆောင်းပါး၌လည်းကျွန်ုပ်ပြောမည်။
ငါတို့သိသည့်အတိုင်း, ** GNOME 3.16 ** သည် Desktop Environment ကိုနှစ်သက်သူများနှင့်တောင့်တသောစိတ်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်မနေ့ကထွက်လာသည်။ ထိုအပျော့ပျောင်းအားလုံး၏အကြောင်းရင်းကဘာလဲ? ကောင်းပြီ၊ များစွာသောသူတို့၏ထင်မြင်ချက်အရယခုကောင်းသောအရာများလုပ်ဆောင်နေကြသူအနည်းဆုံးအများစုဖြစ်သည်။
### GNOME ၏ ၃.၁၆ မကောင်းသောအရာများ။
ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းငါအပျက်သဘောဆောင်သောအရာနှင့်ပတ်သက်။ ငါပြောမယ့်အရာများစွာကို extensions မှတဆင့်ဖြေရှင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်, သို့သော်ငါက၎င်း၏ developer များကပdefaultိသန္ဓေအဖြစ်က default အနေနဲ့နှင့်ဖြည့်စွက်ခြင်းမရှိဘဲတီထွင်သောကြောင့်ငါရည်ညွှန်းသွားတယ်။
#### windows interface များ
ငါက interface ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်မဟုတ်ပေမယ့် GNOME မှာရှိတဲ့ယောက်ျားတွေက OS X ရဲ့အသွင်အပြင်ကိုသိဖို့နီးကပ်စွာကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသတိပြုမိဖို့သင်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုအပြစ်တင်ရမလဲ။ ကျွန်တော်မဟုတ်ပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကပထမဆုံးအနုတ်လက္ခဏာဖြစ်လိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့်အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာပါ။
ငါပြောသောစကားသည်ဆန့်ကျင်မှုဖြစ်နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်မိမိကိုယ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာရှင်းပြရန်ကြိုးစားလိမ့်မည်။ Application များ၏ပုံပန်းသဏ္ktopာန်နှင့် Desktop Environment သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၎င်းသည် OS X ၏ပုံစံနှင့်အလွန်နီးစပ်သည်။
GNOME Apple * OS ကိုတုပရန် (သို့) ကူးရန်ကြိုးစားသူမှာသင်တစ် ဦး တည်းမဟုတ်ပါ။ Unity ၌တူညီသောကူးယူထားသောအတွေးအခေါ်နှင့်အတူ၊ ပျောက်ဆုံးနေသောတစ်ခုတည်းသောအရာမှာ Dock ကိုအောက်ခြေတွင်ထားရန်၊ GNOME Shell ဒီဇိုင်းနှင့်တူညီသောအရာများဖြစ်သည်။ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလုံးတွင်ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းတို့ကိုနေရာမှရွှေ့ပြောင်း။ မရပါ။ ။
ဒါပေမယ့်ကောင်းပြီ၊ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ GNU / Linux သုံးစွဲသူများကို ** ပိုပြီးစတိုင်လ်များသောအားဖြင့်တစ်ခုခုယူဆောင်လာရန်ဆိုရင်၊ သူတို့အောင်မြင်ခဲ့တယ်၊ သို့သော်ကူးရေးခြင်းသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်၎င်း၏အားနည်းချက်များရှိသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသိသည့်အတိုင်းယခု GNOME * သည် OS X စတိုင်ဖြင့် tools menu * ဖြင့်ခေါင်းစဉ်ဘားနှင့် ၀ င်းဒိုးခလုတ်များကို CSD ဟုခေါ်သည့်အရာဖြင့်ပေါင်းစည်းလိုက်သည်။ အိုကေ၊ ဒီအားနည်းချက်ကဘာလဲ။
အမြင်အာရုံအနည်းငယ်သာဖြစ်သော်လည်း application အပလီကေးရှင်းသေဆုံးသွားလျှင်ပြတင်းပေါက်သေသွားသောကြောင့်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထိန်းချုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ငါတို့အဲဒါကိုပိတ်လို့မရဘူး၊ အနည်းဆုံးတော့မဟုတ်ဘူး။ ပြီးတော့ဒါကအနုတ်လက္ခဏာဖြစ်ဖို့ပြaနာတစ်ခုလား။ ငါပြောလိမ့်မယ်၊ ဒီအဖြေကပြတင်းပေါက်ချိတ်ဆွဲထားတဲ့အချိန်မှာငါတို့လုပ်နေတဲ့အရာပေါ်မှာမူတည်လိမ့်မယ်။
သုံးစွဲသူများစွာမနှစ်သက်သောအရာတစ်ခုမှာ GNOME သည် application များကို screen ၏ညာဘက်အပေါ်ထောင့်တွင်နေရာချထားခြင်းကိုခွင့်မပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ system tray သွားမည့်နေရာ၏နေရာတွင်ဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်ဤဗားရှင်း ၃.၁၆ တွင်ရောက်ရှိလာသည်။ အဖြေတစ်ခု - System tray ကိုအသုံးပြုသော applications များသာပုန်းနေခြင်းသို့မဟုတ်ပြခြင်းတို့ရှိမှသာခုန်နေပုံပေါ်သောဘယ်ဘက်အောက်ခြေရှိ panel လေးတစ်ခု * ။
ယခုအချိန်အထိစိတ်ကူးကမကောင်းဘူး၊ ဘာကြောင့်အပေါ်ဘောင်ကိုအိုင်ကွန်များဖြင့်ဖြည့်ရမည်နည်း။ သို့သော်ကျွန်ုပ်မနှစ်သက်သောအရာများသို့မဟုတ်ကျရှုံးခြင်းအဖြစ်တွေ့ရှိရသောအရာများရှိပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အဆင်ပြေအောင်ချိန်ညှိသည့်အခါ system tray သည်ညာဘက်အခြမ်းတွင်ရှိနေသည်၊ ၎င်းသည်အပေါ်သို့တက်သည်ဖြစ်စေအရေးမကြီးပါ၊ သို့သော်ညာဘက်တွင်ရှိသည်။ ဒီအရာအချို့အတွက်မသက်မသာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် (ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပါဝင်သည်) ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုဝှက်ပြီးအနိမ့်ဆုံးအနေဖြင့်အသုံးပြုခြင်းသည်သတိပေးစနစ်အသစ်နှင့်မကိုက်ညီပါကကျွန်ုပ်တို့ဘာမှရှာမည်မဟုတ်ပါ။ အချို့သောသူများအတွက်အဆင်ပြေပါသည်၊ ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်ဆိုးပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် * tray * သို့ကျွန်ုပ်ပို့ဆောင်သောအပလီကေးရှင်းများသည်ကျွန်ုပ်ကိုအကြောင်းကြားရန်နှင့်မြင်သာသောနေရာတွင်ရှိနေရန်လိုအပ်သောအရာများဖြစ်သည်။
#### ကျနော်တို့မှာ task bar မရှိသေးဘူး။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြတင်းပေါက်ကိုပြောင်းလဲလိုပါကသို့မဟုတ်ဖွင့်ထားကြောင်းတွေ့မြင်လိုပါကကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်သင့်သနည်း။ ပုံမှန်အားဖြင့် GNOME တွင် windows အတွင်းရှိ Maximize / Minimize ခလုတ်များမပါရှိပါ။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်း၏ developer များကကျွန်ုပ်တို့သည် windows တစ်ခုစီကိုအခြားတစ်ခုအောက်တွင်သို့မဟုတ်သီးခြား Desktop များပေါ်တွင်ဖွင့်ချင်သည်ဟုယူဆကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်ပွင့်လင်းတဲ့ application တွေကိုကြည့်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့မှာရွေးချယ်စရာ ၃ ခုရှိတယ်။
* dashboard ကိုပြသရန်ဘယ်ဘက်အပေါ်သို့ mouse cursor ဖြင့်သွားပါ။
+ အတူတူလုပ်ပေမယ့် key ကိုနှိပ် စူပါ L (Windows အလံနှင့်အတူတ) ။
+ သို့မဟုတ်သုံးပြီး apps များအကြားပြောင်းပါ alt + tab ကို.
ဤဗားရှင်း ၃.၁၆ ၏ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုများအနက်တစ်ခုမှာယခုနာရီနှင့်အတူထိပ်သို့သွားသောအသိပေးချက်များဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းမှာအဲဒီအကြောင်းတွေပြောမယ်၊ အခုငါ GNOME 3.16 မှာလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်အချို့ရဲ့အသိပေးချက်ကိုရည်ညွှန်းတော့မယ်။
ဥပမာတစ်ခုက USB မှတ်ဉာဏ်တခုကိုဆက်သွယ်တဲ့အခါ၊ ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ၊ USB port ကိုပုတ်လိုက်တာကိုတစ်ယောက်ယောက်တွေ့ပြီလား။ မဟုတ်ပါ၊ နာရီဝက်ဘေးတွင်ပေါ်လာသည့်ပတ်ပတ်လည်အစက်ငယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့မကြည့်ပါကကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေမည်မဟုတ်ပါ။
Notification preferences မှာတောင်မှဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကို notification ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းခွင့်ပေးတဲ့ option ကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်။ ယခုတွင်သင်သည်တစ်စုံတစ် ဦး ကကြင်နာပါက ** Nautilus ** မဖွင့်ဘဲတစ်ချိန်ကတပ်ဆင်ထားသောဖြုတ်တပ်နိုင်သည့်စက်ကိုမည်သို့ဖြုတ်ရမည်ကိုပြောပြပါ။ ဘယ်နေရာမှာမဆိုအတွက်ရွေးချယ်စရာမရှိပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ မည်သူမဆိုရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း၊ ကူးယူခြင်းနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုစုစည်းခြင်းအပြင်သင်ဘာမှလုပ်စရာမလိုကြောင်းပြောဆိုချက်ဟောင်းနှင့်မည်သူမဆို ၀ င်လာလျှင်၊ GNOME ၏ရိုးရှင်းမှုသည်သင့်အားမှတ်ချက်ပေးရန်အတွက်အခက်အခဲရှိနိုင်သည်။ ထိုအခါငါလေးစားမှုကနေပြော, သမိုင်းဟောင်းထက်ပိုပါတယ်။
[ကိုးကားချက်] များစွာသောသူတို့သည် KDE ကိုဝေဖန်ကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်ပိုကောင်းမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့မသုံးသောရွေးစရာများရှိရန်လိုအပ်သည်။
အဲ့ဒါကပဲ GNOME နဲ့၎င်းရဲ့ applications တွေနဲ့ကျွန်တော်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကို Nautilus ဆင်းရဲသောသူသည်နေ့စဉ်လုပ်ခနည်းသောကြောင့်မကြာမီသူ၌ရွေးချယ်စရာအနည်းငယ်သာရှိတော့သည် သွန်း y PCManFMဒါကြောင့်ပြီးသားကြောင်းအချက်ရောက်ရှိမထားဘူးဆိုရင်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ တစ်ချိန်တည်းတွင်ဖိုင်များစွာကိုအမည်ပြောင်းရန်ကြိုးစားပါ။ ဥပမာနှစ်ခုကိုဖော်ပြရုံသာမကပဲ၎င်းသည်၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုသွားစရာမလိုဘဲဖိုင်အရွယ်အစားကိုကြည့်ခွင့်မပြုပါ။ Gedit ၎င်းသည်အခြားတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်ဟေး၊ မတူကွဲပြားသောဘာသာစကားများအတွက်အရောင်ကိုမီးမောင်းထိုးပြထားသည်။
အလွန်လှပသော GNOME ပြက္ခဒိန်၏ပုံစံဖြစ်သည် မာယာ ၏ပြက္ခဒိန် မူလတန်း OSသို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်ရပ်များကိုထင်မြင်ချက်နှင့်ဆန့်ကျင်စွာစီမံခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းသောခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုစမ်းသပ်ရန်, ယနေ့အဘို့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖန်တီးရန်သင့်အားဖိတ်ကြားနှင့်ထိုအတူတူဖြစ်ရပ်ကဆွဲယူခြင်းအားဖြင့်, မနက်ဖြန်အဘို့အရှောက်သွားရန်ကြိုးစားပါ။ အသစ်တစ်ခုဖန်တီးရန်၊ အဟောင်းနှင့်တူညီ။ ဟောင်းကိုဖျက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ကျွန်တော်ဆက်လုပ်နိူင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီအပိုင်းကိုအဆုံးသတ်ချင်ရင်ကျွန်တော်တို့မှာ GNOME Control Center ** ရှိတယ်၊ အချို့ကိစ္စတွေမှာအရမ်းမလွယ်ကူပေမယ့်အချို့သောရွေးချယ်စရာများကို Windows အတွက်ထက်ပိုပြီးနှိပ်ရမယ်။
၎င်းကိုဖြည့်စွက်ရန်အတွက် * Gnome Tweak Tools * မရှိလျှင်ပုံမှန်အားဖြင့်ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိပါကဥပမာအားဖြင့်၊ စာသားဖောင့်ကိုပြောင်းလဲရန် * DConf / Gconf-Editor * နှင့်အလွန်ခက်ခဲသောလုပ်ငန်းတာဝန်ရှိလိမ့်မည်။ ဒါဟာ GNOME အသစ်မှာငါအမြဲတမ်းအပြစ်တင်မယ့်အချက်ပဲ။
Application သို့မဟုတ် command launcher ( Alt + F2 ) တွင်အလိုအလျောက်ပြီးဆုံးခြင်းမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်ချင်သော application ၏အမည်အတိအကျကိုသိရန်လိုသည်။
### GNOME ၏ ၃.၁၆ ကောင်းသောအရာများ
ဒါပေမယ့်အရာရာတိုင်းဟာမကောင်းဘူးမဟုတ်လား။ GNOME Shell 3.16 ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးအချက်တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ interface နှင့်၎င်းသည်မည်မျှရိုးရှင်းသည်ကိုတိတိကျကျဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြောရလျှင်၎င်းသည်လိုက်လျောညီထွေစွာရှိပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်နည်းသောအရာများပါ ၀ င်သည့်လှပသော Desktop Environment တစ်ခုဖြစ်သည်။
#### သေတ္တာများ (သို့) GNOME Boxes
ချီးမွမ်းခြင်းထက်မကထိုက်တန်သော Qemu-kvm အတွက်ရှေ့တန်း။ ဒီလိုရိုးရှင်းတဲ့ကိရိယာတစ်ခုကိုအရင်က virtualize လုပ်ဖို့ဘယ်သူမှမစဉ်းစားဖူးဘူးလို့စဉ်းစားမိရင်ကောင်းပါတယ် ဒီဗားရှင်းမှာတော့အသုံးပြုရတာပိုလွယ်ကူပြီးပျော်စရာကောင်းတယ်။
GNOME Shell အကြောင်း၊ ငါအမြဲတမ်းကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာ၊ ဥပမာအားဖြင့် jabber မှပုဂ္ဂလိကစာတစ်စောင်အားအကြောင်းကြားစာမှပြန်လည်တုံ့ပြန်ရန်ဖြစ်သည်။
အသိပေးချက်အသစ်များသည်မဆိုးပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ထွက်ခွာလိုသည့်သို့မဟုတ်အနီးကပ်ထားလိုသောအရာများကိုမရွေးချယ်နိုင်ခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုအလွန်စိတ်မသက်မသာဖြစ်စေသည်။ အချို့သည်အလိုမရှိသူပင်ပျောက်ကွယ်သွားသည် (သို့) သူတို့ဆက်ရှိနေသေး။ မဖယ်ရှားနိုင်ပါ။ အမှားများရှိသော်လည်းသင့်ကိုခွင့်လွှတ်သည်။ ၎င်းတို့သည်အလွန်အေးမြပြီးယခင်ကအသုံးမ ၀ င်သောနေရာတစ်ခုတွင်ကောင်းသောနေရာတွင်ရှိသည်။
၎င်းသည် ၀ င်းဒိုးမိတ္တူကူးသည်ဖြစ်စေ၊ မသည်ဖြစ်စေ GDM သော့ခတ်မျက်နှာပြင်သည်လှပသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်သတိပေးချက်များရှိပါက၎င်းကိုကွန်ပျူတာသို့မသုံးပဲကြည့်နိုင်သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်အသုံးပြုသူများ၏ privacy ကိုပြseriousနာဖြစ်စေနိုင်သည်။
GNOME Shell အကြောင်းကျွန်တော်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာရိုးရှင်းသောသော့များဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ desktop ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်ဖြစ်သည်။ alt + Ctrl + + အဆိုင်း + R.
#### extension များ
သူတို့မရှိရင်ဘယ်သူမှမည်သူမဆို GNOME Shell မှာတစ်ပါတ်ကျော်လောက်ရှင်သန်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အရမ်းသံသယဝင်နေတယ်၊ ​​သူတို့မတောင်းဆိုနိုင်ရင်ပဲ။ တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်ကတော့အခုချိန်မှာ GNOME 3.14 မှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတော်တော်များများဟာ GNOME 3.16 မှာပိတ်ထားပြီးပါပြီ။ သို့သော်သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြသင့်သောကောင်းသောအရာတစ်ခုဖြစ်မည်မှာသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။
### GNOME 3.16 အပေါ်နိဂုံးချုပ်သည်
ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းချစ်တတ်သူတွေအတွက်အကောင်းဆုံး Desktop Environment ကို GNOME မှာရှာတွေ့မှာသေချာပါတယ်။ IRC client အသစ်၊ မြေပုံများ၊ ပြက္ခဒိန်များကဲ့သို့သောအသုံးချပရိုဂရမ်များသည်လှပသန့်ရှင်းသည်ကိုသူတို့ခြိုးခြံခြွေတာမှုမှရရှိသည်။
ငါကောင်းစွာပြုမိသောရာသီဥတုကဲ့သို့ applications များအများအပြားကိုချစ်။ သို့သော်ထိုနေ့၏အဆုံးတွင်သင်၌အလုပ်လုပ်ရန်လုံလောက်ရုံသာမက Desktop ကိုအပြည့်အဝညှစ်။ မရနိုင်ကြောင်းသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။
ငါဂီတလိုစမ်းသပ်လို့မရတဲ့တခြားသူတွေလည်းရှိတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က Python နဲ့စတာမျိုးလုပ်ဖို့အမှားလုပ်မိတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုနဲ့လုပ်ခဲ့တာ။ Empathy ကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ chat ၀ င်းဒိုးကိုဘယ်တော့မှဖွင့်လို့မရဘူး။ ငါထင်တာကတော့ဒီဇိုင်း (တက်ဘလက်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရည်ညွှန်းထားတဲ့) ဒီဇိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရှေ့နောက်မညီမှုတချို့ရှိနေတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြတင်းပေါက်တွေမှာကြီးမားတဲ့ခလုတ်တွေကိုတွေ့နေရတုန်း scroll bar တွေကအရမ်းကျဉ်းတယ်။
သို့သော်ယေဘူယျအားဖြင့်ဆိုရလျှင် GNOME ဖြန့်ချိမှုတစ်ခုစီသည်သူတို့၏ရည်မှန်းချက်များကိုပိုမိုအာရုံစိုက်လာပြီးပိုမိုအောင်မြင်သောထုတ်ကုန်ကိုကမ်းလှမ်းလာသည်။ ငါကမကြိုက်ဘူး, ငါကအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောရှာမတှေ့သောကြောင့်, ငါ့တန်ဖိုးထားရုံအသုံးပြုသူများစွာသက်သာခံစားရသည်ကိုငါသိ၏။ ကျွန်ုပ်အသုံးမပြုသေးသောသို့မဟုတ်မသိသေးသောအခြားအကျိုးခံစားခွင့်များလည်းရှိနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်အားမှတ်ချက်များမှအကြံဥာဏ်များနှင့်စံနှုန်းများကိုကြားရသောကြောင့်တစ်နေ့နှင့်တစ်နေ့ငါတွေ့လိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » GNOME ၃.၁၆ ၏အကျဉ်းချုပ်
ဤဘလော့ဂ်တွင်ဖော်ပြထားသောထင်မြင်ချက်များသည်၎င်းတို့ကိုထုတ်ပေးသူ၏တစ်ခုတည်းသောတာ ၀ န်ဖြစ်သည်။ desdelimux.net ၏အတွေးကိုသေချာပေါက်မဖော်ပြပါ။
ကျနော့်အမြင်ကတော့ gnome ကိုဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းပညာရှင်တွေဖန်တီးထားတာပါ
ငါ gnome မှာ taskbar မရှိဘူး၊ ငါက mouse ရဲ့အစွန်အဖျားကိုသယ်ဆောင်သွားပြီးငါ့ရဲ့ပြတင်းပေါက်တွေကိုတကယ့်အချိန်မှာမြင်ရတာအရမ်းကောင်းတယ်။
ဥပမာ KDE တွင်လုပ်နိုင်ပြီး taskbar ရှိသေးသည်
ကျနော့်အချက်ကတော့ငါ GNOME ကိုနှစ်သက်တယ်၊ shell ရဲ့အရသာအားလုံးကိုငါစမ်းကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒီလိုစီမံကိန်းမျိုးရဲ့အရသာနဲ့လေးစားမှုကိုဘယ်သူမှမပျောက်စေဘူး။
၎င်းသည်စာရွက်စာတမ်းအမြောက်အများကိုတစ်ချိန်တည်းကိုင်တွယ်သောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုတာကတော့ GNOME ကအဆိုပြုထားသောအပြုအမူသည်စာရွက်စာတမ်းများစွာကိုကိုင်တွယ်ရန်အလွန်အသုံးဝင်သည်မဟုတ်ပါ။
ငါက taskbar ကိုမမြင်ဘူးဆိုရင်အာကာသယာဉ်မှူးကသူ့အာကာသယာဉ်ကိုရှာနေတဲ့အာကာသယာဉ်မှူးလိုခံစားရတယ်။
Gnome ဟာချစ်စရာကောင်းတယ်၊ ငါကအမြဲတမ်းကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့တစ်ခုခုလုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားတယ်၊ တစ်ခါတလေတော့ငါ့အတွက်စိတ်မ ၀ င်စားဘူး။
သို့မဟုတ်ပါက OSX Yosemite သည် Gnome မှ TODOOOOOO ကိုကူးယူခြင်းဖြစ်သည်။ ^ _ ^
ဒါဟာအစ hehehe နိုင်ပါတယ်။
သင်ပြတင်းပေါက်သည် osx ၏မိတ္တူတစ်ခုဖြစ်သည် gnome မဟုတ်ဘဲအခြားတစ်ဖက်တွင်မူဖြန့်ချိမည့်ရက်ကိုမကြည့်ပါနှင့်
Chuck daniels ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန် Gnome Shell အသုံးပြုသူတစ် ဦး အနေနှင့်အချို့သောထင်မြင်ချက်များကိုသဘောမတူပါ၊ သို့သော်သူတို့သည်လေးစားထိုက်သူဖြစ်သည်။ ကျနော့်အမြင်အရ, ဒီ desktop ၏အတွေးအခေါ်သည်အလုပ်လုပ်နိုင်စေရန်အခြေခံနှင့်လိုအပ်သောအရာများကိုထောက်ပံ့ပေးရန်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းကိုတိုးချဲ့လိုပါက၎င်းသည်သက်ဆိုင်ရာစာမျက်နှာမှကလစ် နှိပ်၍ တိုက်ရိုက်တပ်ဆင်နိုင်သောတိုးချဲ့ချက်များနှင့်အလွယ်တကူဖြစ်နိုင်သည်။
သတိပြုရမည့်အချက်အနေနှင့်၊ ပြက္ခဒိန်သည်စမ်းသပ်မှုအဆင့်တွင်ကြိုတင်မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းအသစ်ဖြစ်ပြီး Shell ဗားရှင်း ၃.၁၁ တွင်ကျိန်းသေဖြန့်ချိလိမ့်မည်။ သူတို့ကအစ Ebooks များအတွက်အခြားကဆက်ပြောသည်ပါပြီ။
ကောင်းသောပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ကောင်းသောဆောင်းပါး, ကတက်စောင့်ရှောက်လော့။ 😉
Chuck Daniels ကိုပြန်ပြောပါ
မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Chuck Daniels ။ တကယ်တော့၊ မင်းကမင်းရဲ့အဆိုကိုသဘောတူတယ်။ မင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်ကိုမင်းမှာပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ သုံးစွဲသူတိုင်းသည်ကွဲပြားခြားနားပြီးလိုအပ်ချက်များမှာကွဲပြားသည်။ ငါ GNOME ကငါ့ကိုမကမ်းလှမ်းတဲ့အရာအချို့နဲ့အဆင်ပြေနေပြီ။
အလုပ်လုပ်ခြင်းသဘောတရားသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားမှုရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်သဘောတူသည်။ ရှေ့နေတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်စာရွက်စာတမ်းများကိုတစ်ချိန်တည်းဖွင့ ်၍ အလွယ်တကူသွားလာရန်လိုအပ်ပါသည်။ Unity စနစ်တောင်မှဒီကိစ္စတွေအတွက်ကျွန်တော့်ကိုမသက်မသာဖြစ်စေတယ်။ ဒါ့အပြင် Activities ကိုသွားပြီးဒါမှမဟုတ်သော့တွေကိုပေါင်းစပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်၊ သို့မဟုတ်ငါပြတင်းပေါက် minimize ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒီ GNOME box ကိုထဲကကမ်းလှမ်းသောအယူအဆဖြစ်ပါတယ်။
Extensions အရာကအရမ်းကိုကောင်းပေမယ့် ... စာကြည့်တိုက်များနှင့် APIs များသဟဇာတမဖြစ်ခြင်းပြtheနာကိုဖြေရှင်းပြီးပြီလား။
ZombieAlive ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
ဟုတ်ကဲ့၊ ဒါပေမယ့် Gnome shell မှာနေထိုင်သူတွေဟာစံသတ်မှတ်ထားတဲ့အရာများစွာကိုမပေါင်းစပ်နိုင်ပါ။ ရွေးချယ်စရာများကင်းမဲ့ပေမယ့်သိပ်ပြီးအလိုလိုသိနားလည်မှုမရှိကြသည့်အခြားသူများလည်းရှိသည်။ GNOME Tweak Tool သည်မလိုအပ်သောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် gnome control center ရှိရမည်။ နောက်တစ်ခုက gnome control center ဟာလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးအကန့်အသတ်ရှိတယ်။ နှင့်အသုံးပြုသူထိန်းချုပ်မထားဘူးသောအခြားအရာများစွာကို။ Fedora ပေါ်ရှိ Gnom shell သည် megabytes ၆၀၀ မှသည် 600gig machine ပေါ်တွင် 1gb ram အထိစတင်ပြီး၎င်းကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းမရှိပါ။ ၎င်းသည် beta တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာပါဝင်ခဲ့သည့် desktop ဖြစ်သည်။ gnome-screen-saver သို့မဟုတ် gnome-session-propities သို့မဟုတ် beta ကဲ့သို့သောအခြားရွေးချယ်စရာများစွာပင်မပါဝင်ပါ။
သင်မှန်ပါတယ်; Gnome developer များက၎င်းကိုပိုမိုလက်တွေ့ကျစေမည့် functions များဖြင့်ချဲ့ထွင်ရန်ဖြစ်နိုင်သောအခြေခံပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သင့်ကိုတင်ပြသည်။ ၎င်းတို့သည်အသေးစိတ်ကျယ်ပြန့်သောရွေးချယ်စရာများရှိသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုကမ်းလှမ်းခြင်းအပေါ်အာရုံမစိုက်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကမရှိတော့တာဟာအနည်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်။ သို့သော်၎င်းသည်ကြော့ရှင်းပြီးခေတ်မီသောပုံစံကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမဖယ်ရှားပေးပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းသည်မျက်စိကိုနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းပြီး GTK နှင့် Shell themes များဖြင့်လည်းတိုးတက်နိုင်သည်။
Desktop Environment ကိုရွေးချယ်ရာတွင် Custom factor သည်အရေးကြီးသောကဏ္playsမှပါဝင်သည်။ ငါ့မှာ PC ရှိတယ်ငါ Linux သုံးတယ်။ Windows နဲ့ Mac ကိုကြာရှည်မသုံးဖူးဘူး။
နှိုင်းယှဉ်ခြင်းသည်မုန်းတီးခြင်းဖြစ်သည်ဟုအမြဲတမ်းပြောလေ့ရှိသည် ဒါကဥပမာဖြစ်နိုင်တယ်။ ၎င်းသည် kde သည်ပိုမိုလက်တွေ့ကျသော်လည်း၎င်းသည်ပိုမိုလေးလံပြီး Gnome-Shell ပိုမိုပေါ့ပါးပြီးပိုမိုမြန်ဆန်သည်။ သူတို့၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးသည်ကျွန်ုပ်၏နှိမ့်ချသောအမြင်ဖြင့်တရားဝင်သည်။
ငါနှိုင်းယှဉ်မှုများမလုပ်ချင်ပါ။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင် KDE သည် GNOME ထက် ပို၍ လေးလံသည်သို့မဟုတ် ပို၍ နှေးသည်၊ နေ၏အရွယ်အစားမှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ယခုဤဖြစ်ရပ်တွင်သင်“ လေးလံသော” ဆိုသောအရာကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်သင့်သည်။
GNOME ဟာမမှန်ကန်ဘူး၊ ဘယ်တော့မှမပြောဘူး၊ (တစ်နည်းပြောရရင်) အဲဒါကငါ့ကိုမဖြေရှင်းနိုင်ဘူး၊ အဲဒါဟာအတူတူမဟုတ်ဘူးလို့ငါပြောခဲ့တယ်။ GNOME သည်ကောင်းမွန်သော Desktop Environment ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်အတွက်တော့မဟုတ်ပါ။
1.2 Gb ရှိ Konqueror ဖြင့် KDE ပြောပြီးပြီ။
Firefox တစ်ဝက်နှင့်အတူ Gnome ။
တစ်ချိန်က Diazepan ပြောခဲ့သလို "နှစ် ဦး စလုံးဟာလုံးလုံးလေးလံပြီးအကြီးအကျယ်ပြည့်စုံနေတယ်"
KDE နဲ့ Fedora မှာငါအမြင့်ဆုံး 800mb လောက်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ homerun launcher က ၂၅၀mb လောက်ပဲရှိတာပါ၊ ဒါပေမယ့် distn တမျိုးတည်းမှာပဲ gnome shell ဒါမှမဟုတ် kinnamon နဲ့ Desktop ကငါ့ကိုစတင်မှာပါ။ ပတ်ဝန်းကျင်။ ငါ့မှာ 250-core CPU, 1200gb Nvidia ဂရပ်ဖစ်၊ 900 RAM ရှိတယ်။ အဲဒီအရင်းအမြစ်တွေက gnomeshell ဒါမှမဟုတ် Cinnamon မှာမကောင်းတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့မထင်ဘူး။
ပြတင်းပေါက် "အတူတူလုပ်ပေမယ့်စူပါ L ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်း (Windows အလံနှင့်အတူသော) ပေါ်လာဖို့။ " ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော့်မှာ Win key နဲ့အတူအရာအားလုံးရှိတယ်။ အရာအားလုံးကိုကီးဘုတ်ကနေတဆင့်၊ ငါ mouse နဲ့ဘယ်နေရာကိုမှသွားစရာမလိုဘူး။ Key Win ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော့် windows ကိုတကယ့်အချိန်မှာတွေ့မြင်ရပါတယ်။ တစ်ခုခုကိုဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနည်းငယ်ရိုက်လိုက်တာပါ။ ဒါကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်သည်အနည်းဆုံးလိုချင်သည်။ (ငါ configuration tools များနှင့်အတူပြောင်းလဲပစ်)
"သင် desktop ကိုအောက်ခြေသို့မချနိုင်ပါ ... " Desktop အောက်ခြေကိုညှစ်ထားခြင်းကဘာလဲ။ မင်္ဂလာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Gnome သည် ပို၍ တင့်တယ်လှပေသည်၊ သို့သော် touch screen အတွက်အလွန်ရည်ရွယ်ထားသည့်ရိုးရှင်းသော desktop pc နှင့် ပို၍ ဝေးသောနေရာတွင်အထောက်အကူပြုသည့် extensions အချို့ရှိပြီးအချို့ကိုလျစ်လျူရှုထားသည်။
နှစ် ဦး စလုံးသည်ငါ့ pc ။ မကောင်းတဲ့ပေမယ့်ငါသစ်ကြံပိုးကြိုက်တတ်တဲ့ ။-
ငါ kde နှင့်အတူနေဖို့ဒါကြောင့်ပါပဲ
KDE အဟောင်းကိုကိုင်ထားပါ၊ ဘာမှအရေးမကြီးတော့ဘူး ... ဟဟားဟား
Cinnamon သည် Gnome ကိုယ်တိုင်ထက်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကအလွန်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ အလွန်ကောင်းမွန်သော desktop တစ်ခုဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်က Mint ကိုဝမ်းကွဲတစ် ဦး အဖြစ်တပ်ဆင်ခဲ့သော်လည်းအမှန်တရားမှာ၎င်းသည် "လေးလံသော" တွေ့ရှိချက်ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးသူသည် KDE နှင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သူသည် Windows မှလာသည့်အတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ခဲ့သည်။ ၅ ရက်အကြာတွင် Desktop သည်လက်ဖြင့်ကိုင်တွယ်ခြင်းမှအသိအမှတ်မပြုနိုင်လောက်အောင်သူစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ထားသောအရောင်များကိုဖော်ပြခြင်းမဟုတ်ပါ။ facepalm: အရသာ၊ အရောင်များ။
GNOME သို့မဟုတ် kde .... ။ openbox စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ😛
ကျွန်ုပ် wm ကိုအမြဲတမ်းပိုနှစ်သက်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ pc သည်ဗိုင်းနစ်သို့မဟုတ်အလွန်အားကောင်းသောကြောင့်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ပြproblemsနာမရှိဘဲ kde ကို run နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ရိုးရိုးလေးကိုနှစ်သက်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင် application များဖွင့်ရန် menu ရှိသည်၊ အချိန်၊ system tray နှင့်ကျွန်ုပ်ပြီးပြီ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်သည် desktop လိုအပ်လျှင် xfce ကိုအသုံးပြုသည်
Gnome, KDE, WM အသုံးပြုသူများသည် sooooo mainstream ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါးကိုဖတ်ရုံဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤကဲ့သို့သောနဂါးတစ်ကောင်ကိုတစ်နေ့ကျွန်ုပ်ကြိုးစားကြည့်စေလိုသည့်အတွေးအယူအဆကိုစွန့်လွှတ်လိမ့်မည်။ Debian ကိုစတင်မယ့်အစားဗေဒင်လှတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ချင်တဲ့အခါငါ Windows Vista ကို Aero နဲ့ chirimbolos နဲ့စဖွင့်လိုက်တယ်။ ငါကအရာအားလုံးကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် Debian နဲ့ Mate Desktop နဲ့တွဲလုပ်မယ်။ ရှင်းလင်းပြတ်သားသောရည်ရွယ်ချက်များမပါဘဲ၊ လိုအပ်ချက်မရှိဘဲ၊ မည်သည့်ပြsolvingနာကိုမဆိုဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ခေါင်းကိုက်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းစသည့်ပြောင်းလဲမှုကိုယ်နှိုက်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဘာကြောင့်လဲ ... အကယ်၍ ထိန်းချုပ်မှုများမှန်ကန်လျှင်၊ အခြားတစ်ဖက်သို့ပြောင်းခြင်းဖြင့်ဘာကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သနည်း။ ဘာဖြစ်လို့အလုပ်ထွက်ရတာလဲ Windows 8 နှင့် Metro or Modern interface နမူနာကိုယူပါ။ လူကြိုက်များမှုမရှိပါ။ ၎င်းသည်ရုံးခန်းတစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်ရန်မသင့်တော်သောကြောင့်သူတို့တစ်သက်တာ၏ start menu သို့အမြန်ပြန်သွားခဲ့ရသည်။ ထို့နောက်ငါ Debian နှင့်အတူ Mate Desktop ကိုအတူတူမြင်တွေ့ရလိမ့်မည်၊ ယခင်ပုံစံသည် Gnome ထက်ပင်ပိုသည်။ အရာအားလုံးသွားသင့်တယ်၊ အရာရာတိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်၊ အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်။ "ဒါကအလုပ်ဖြစ်တယ်၊ မပြင်ဘူး"
ဟဟဟဟားမ၊ ပြတင်းပေါက်ခလုတ်များသည်ပုံမှန်အတိုင်းမှန်၏။ အကြောင်းပြချက်တခုခုကြောင့်အဲလက်တွေကိုသူတို့ကိုလက်ဝဲဘက်သို့ပြောင်းလိုက်သည်။
အရာအားလုံးနီးပါးမှာမင်းနဲ့သဘောတူတယ် ၎င်းသည်အလွန်လှပသော desktop တစ်ခုဖြစ်ပြီးမိုးလေ ၀ သနှင့်မြေပုံကဲ့သို့သောအသုံးချပရိုဂရမ်များအလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်ဟုငြင်းနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်အလုပ်လုပ်ရန်အလွန်ထိရောက်မှုမရှိပါ။ ငါဘာမှအကျိုးရှိမှာမဟုတ်ဘူး ဘာကြောင့်အသုံးပြုသူကစနစ်ကိုအသုံးပြုသင့်သည်ဟုထင်သလဲ။ မည်သည့်အခြား DE ကမဆိုကျွန်ုပ်တို့အား၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏အရသာနှင့်လိုအပ်ချက်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အခြေအနေတွင်ကျွန်ုပ်၏ KDE သည်စက်ရုံမှလာသည့်ပုံစံနှင့်လုံးဝကွဲပြားသည်။
GNOME သည် GNU / Linux ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံး desktop ပတ် ၀ န်းကျင်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးမဟုတ်ပေမယ့်ကျွန်တော်တို့တင်သည့်သတင်းကိုဆိုးဆိုးရွားရွားစတင်ခဲ့သည်။ Gnome သည်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ပါ၊ လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်။ အကောင်းဆုံးစားပွဲခုံတစ်ခုစီစီရွေးချယ်သောစားပွဲဖြစ်သည်၊ ပို၍ လူကြိုက်များခြင်းသည်ပိုကောင်းသည့်အဓိပ္ပာယ်တူမဟုတ်ပေ။
အကယ်၍ ပိုကောင်းသည်သို့မဟုတ်ပိုလူကြိုက်များသည်တစ်ခုချင်းစီ၏တန်ဖိုးတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဖြစ်လျှင်ထိုအကြောင်းကြောင့်ထိုစာမူသည်စတင်မကောင်းပါ။ သို့သော် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ ကျွန်ုပ်အတွက်အကောင်းဆုံး TWO, KDE နှင့် GNOME သာရှိသည်၊ အခြားသူများကဤနှစ်ခုမှ application များကိုသာအသုံးပြုကြသည်။
ကျွန်ုပ်မမှားပါက OSX's CDE များမတိုင်မီတစ်နှစ်အလိုတွင် Gnome Shell Client Side Decorations သည်။ ဒါကြောင့် OSX ပဲ Gnome Shell ကလှုံ့ဆော်ပေးတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ကိုအနည်းငယ်ပိုကောင်းသောအကြောင်းကြားပါ ...
Que လား CDE ဝေါဟာရကို GNOME တွင်ပထမ ဦး ဆုံးစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် OS X တွင်ခဏတာဖြစ်သော်လည်းကြာမြင့်စွာကတည်းက toolbar integration နှင့်အတူထို title bar သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်၏ထင်မြင်ချက်ကိုအငြင်းပွားစရာဖြစ်စေနိုင်သည့်ရင်းမြစ်များရှိပါက၎င်းတို့ကိုမပို့ပါနှင့်။
ဤအပြောင်းအလဲကိုထို နှစ်မှစ၍ စီစဉ်ထားကြောင်း ၂၀၁၁ မှဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။
ငါကြည့်နေပြီး OS X Yosemite မှာဒီအင်္ဂါရပ်ကိုသဘောကျတယ်။ အရင် OS ဗားရှင်း Mavericks ဖြစ်ပြီးအဲဒီမှာကျွန်တော်တွေ့နိုင်တဲ့အတိုင်းသူတို့အကောင်အထည်မဖော်ရသေးဘူး။ OS X ကို 2014 ခုနှစ်တွင်ထွက်လာအဖြစ်, သို့မဟုတ်မ? Gnnome Shell 3.10 သည် CSD ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ငါမမှားရင် Gnome ကပထမဆုံးထွက်လာပြီး OS X ကနောက်ပိုင်းမှာသုံးလိုက်တယ်။ ဟုတ်တာပေါ့၊ ငါပြောဖို့ဘလော့ဂ်ဆောင်းပါးရက်စွဲတွေနဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုသာရှာခဲ့တယ်၊ ငါဒီနှစ်ခုရဲ့သမိုင်းကိုအပြည့်အဝမသိဘူး။ ငါမှားရင်ဖြစ်နိုင်တယ်၊ ဒါဆိုရင်ငါ့ကိုဆုံးမပါ။
elav စကားလုံးမှာ, CSD မဟုတ် CDE (developer.js အဆိုအရလိုင်းဘေးထွက်အလှဆင်)
ကြည့်ကြရအောင်၊ MuyLinux ဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း Epiphany ဒီဇိုင်းကိုသူတို့ကူးယူခဲ့ကြတာဖြစ်နိုင်တယ်၊ သို့သော်၊ toolbar အဆင့်တွင် Close / Minimize / Maximize ခလုတ်များရှိခြင်းသည်ကျွန်ုပ်မှားမဟုတ်လျှင် OS X (app အားလုံးမဟုတ်ပါ) တွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာလှည့်ပတ်နေခဲ့သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ GNOME သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါက၊ ၂၀၁၄/၂၀၁၅ တွင်စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းရှိပါကအရေးမကြီးပါ။ ထို့ကြောင့်ပထမဆုံးရိုက်သူသည်နှစ်ကြိမ်ထိမှန်သည်။ 😀
CSD ကိုငါပြုပြင်ပြီးပါပြီ။ အမြဲတမ်းမှားနေပြီး CDE ကိုထားလိုက်ပါတယ် ဒီကနေဤအရပ်မှစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများ။
ငါဒီစားပွဲနောက်ကွယ်မှအယူအဆရှုပ်ထွေးထင်ပါတယ်။ KDE တွင်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိလိမ့်မည်၊ သို့သော် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းတို့ထဲမှ ၂၀% ကိုသာအသုံးပြုလိုပါက၎င်းတို့အား၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည့်စာကြည့်တိုက်များအားလုံးနှင့်အတူထည့်သွင်းထားခြင်းနှင့် disk နေရာယူခြင်းကိုအဘယ်ကြောင့်လိုသနည်း။
Gnome သည်အလွန်ရိုးရှင်းသောအရာဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည် Desktop များကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးလိုသောအသုံးပြုမှုနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်တိုးချဲ့ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
ငါထင်တာကတော့ GNOME ချဉ်းကပ်နည်းကပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်၊ ဖြစ်ပျက်တဲ့တစ်ခုတည်းသောအချက်ကဗိုင်းရပ်စ်အသစ်တွေနဲ့အတူအဟောင်း extensions တွေဟာအလုပ်မလုပ်တော့တာပဲ။
ဒီသဟဇာတဖြစ်မှုပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်သင်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးဝင်မယ့်အရာအားလုံးကိုတပ်ဆင်နိုင်မှာပါ။ အဲဒါဟာပိုမိုပေါ့ပါးပြီးအမှန်တကယ် modular စားပွဲတစ်ခုရှိခြင်း၊ သင်ပေးမယ့်အသုံးပြုမှုကိုချိန်ညှိပြီးအသုံးမကျသောကောက်ရိုးပမာဏကိုမဟုတ်ပါ။ KDE မှာရှိပြီး၎င်းကိုသင်အသုံးပြုသည်ဖြစ်စေမအသုံးပြုသည်ကိုမျိုချရမယ်။
Devil's Advocate ကိုပြန်ပြောပါ
ဟုတ်ပါသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲတစ်ခုနှင့်တစ်ခုချင်းစီကိုမည်သူနှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်လိုချင်သည်ကိုပြုလုပ်သောကြောင့် KDE ချဉ်းကပ်နည်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။ Gnome နှင့်အတူနေစဉ်, သူတို့သည် bugs ကိုရှာရန် beta ကိုလွှတ်သောအခါစမ်းသပ်သူများသည် extension များအများအပြားကိုမသုံးကြသောကြောင့်၎င်းကို menus များ၌အတိအလင်းမမြင်ရသောကြောင့်၎င်းတို့သည်ဗားရှင်းအသစ်တွင်ပင်အလုပ်မလုပ်ပဲကျန်ရစ်ခဲ့သည်။
ဟယ်လိုဟွန် အတိအကျဆိုရသော်၊ extensions များကိုအကောင်အထည်ဖော်သော system သည်ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည် modularity ဟူသောအယူအဆသည် desktop ကို extensions များနှင့်တိုးချဲ့ခြင်းသည်မကောင်းကြောင်းမဆိုလိုပါ။
သင်သုံးသည်ဖြစ်စေမသုံးသည်ဖြစ်စေအတူတကွ KDE တစ်ခုထက်ကျွန်ုပ်အတွက် ပို၍ ကောင်းမွန်သည်။ ငါဥပမာတစ်ခုပေးသည်။ Baloo၊ လူအများစုက၎င်းသည်အရင်းအမြစ်များစွာစားသုံးခြင်းသို့မဟုတ် ၄ င်းတို့၏ privacy ကိုထိခိုက်စေသည်ဟုထင်သောကြောင့်၎င်းကိုမသုံးလိုကြပါ။
Extension တစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းကိုတစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့်တပ်ဆင်ရန်သို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ရန်ထို option ရှိခြင်းသည်ပိုကောင်းပါမည်မဟုတ်လော။
ဗားရှင်းအသစ်မထုတ်မီ၊ Gnome သည်ဟောင်းနွမ်းသော extensions များကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်သင့်သည်၊ သူတို့မှန်မှန်ကန်ကန်အလုပ်လုပ်နိုင်မည်၊ ၎င်းတို့သည်တစ်စုံတစ်ရာအတွက်တရားဝင်စာမျက်နှာပေါ်တွင်ရှိနေသည်။ သူတို့မလုပ်ပါကအရင်းအမြစ်များမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်မှတ်ချက်ပေးချင်တာကတော့ KDE နဲ့ Gnome ဟာကွဲပြားခြားနားတဲ့ desktop concept နှစ်ခုဖြစ်တယ်၊ ဒါကြောင့်ငါနဲ့နှိုင်းယှဉ်မှုဟာနေရာမရှိဘူးလို့ငါထင်တယ်။
အဲဒါက lxde ကို kde နဲ့နှိုင်းယှဉ်တာနဲ့တူတယ်။ သူတို့ကမတူကွဲပြားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုရှာဖွေတဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်သဘောတရားနှစ်ခုပဲ။ ငါ kde မှာဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိတယ်၊ gnome လည်းမရှိဘူး၊ ဟုတ်တယ်၊ မလုပ်ဘူး၊ ဒါကခင်ဗျားအတွက်အရမ်းအသုံးဝင်တယ်၊ ဒါကိုငါလုံးဝအသုံးမပြုဘူး၊ ဒါဆို ...
Baloo ကို CheckButton ၏စာနယ်ဇင်းဖြင့်ပိတ်ထားနိုင်သည်
KDE သည် disk space အားလုံးနှင့်အတူမှန်ကန်သည်။ hard drive များအလွန်တင်းကြပ်လာသည်နှင့်အမျှ!
Gnome extension များသည်ရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်သင်သည် version တစ်ခုမှတစ်ခုသို့တစ်ခုသို့မွမ်းမံခြင်းကိုမှီခိုနေရသဖြင့်သင့်လက်များကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းသို့မဟုတ်လှိမ့်လှိမ့်ခြင်းနှင့်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်ကိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။
မင်္ဂလာပါ Fistro၊ disk ထဲ၌သင်ရနိုင်သောနေရာ၏မေးခွန်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်သင်အသုံးပြုသော (သို့) အသုံးပြုလိုသောအရာအားလုံးတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်ဘယ်သောအခါမျှအသုံးမပြုပါသော kde options ဖြင့်သိမ်းပိုက်ထားသည့်နေရာတွင် Starwars trilogy၊ ကွင်း၏သခင်၊ ဥပမာအားဖြင့် hobbit နှင့် matrix ကိုငါနှစ်သက်သည်။ သင်မြင်သည့်အတိုင်း၎င်းသည် ဦး စားပေးကိစ္စများမဟုတ်ပါ။
ဦး ဆုံးအနေနဲ့ဆောင်းပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်။ ငါမှာ Ubuntu Gnome 14.04 ကို Gnome 3.10.4 environment နဲ့ install လုပ်ထားတယ်။ ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာ Gnome ဗားရှင်းကိုကျွန်ုပ် update လိုက်သောအခါကျွန်ုပ်၏မှတ်စုစာအုပ်၏လုပ်ဆောင်မှုသော့များသည်တည်ငြိမ်မှုပျောက်ဆုံးသွားလျှင်သို့မဟုတ် ...
ငါဘဝအတွက် GNOME နှင့်အတူနေဖို့။
elav ဘယ်လောက်ချစ်စရာမင်းရဲ့စခရင်ရိုက်ကူးမှုရဲ့ plasma theme ။ ကျွန်တော့်ကိုနာမည်ပြောပြပေးနိုင်မလား? မင်္ဂလာပါ😀
၎င်းသည် AIR ဖြစ်ပြီး၊ tray icon များသည် KDE5 ခေါ် Plasma theme မှဖြစ်သည်။
Plasma (kde) အသုံးပြုသူသည် GNOME အကြောင်းပြောသောဒုတိယတစ်ခုမှာလူမျိုးရေးခွဲခြားသူကိုလူမည်းရှေ့တွင်ထားသကဲ့သို့ဖြစ်သည်
တတိယအချက် - GNOME ကို Firefox ဟုကျွန်တော်သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းတွင်အသုံးပြုမှုကိုတိုးမြှင့်စေရန်နှင့်ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်စေရန် extensions များကိုသင်ထည့်သွင်းထားသောအလွန်ပြည့်စုံသောဘရောင်ဇာတစ်ခုဖြစ်သည်။ )? , ငါပထမ option ကိုသွား ..
စတုတ္ထအချက် - တစ်ခါတစ်ရံတွင် 1g ram ကိုတောင်စားသုံးနိုင်သည့်စနစ်နှင့် bug နှင့်ပြည့်နေသည့်၎င်း၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းတွင်၎င်းကိုအကောင်းဆုံးဟုခေါ်သင့်သည်ဟုမထင်ပါ။
ဤမှတ်ချက်သည်အဘယ်သို့ဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ဖြေကြားပါသည် -
ဒုတိယ - GNOME (သို့) မည်သည့် desktop ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မဆိုငါအမြဲဘက်မလိုက်ပါ။ ကောင်းမကောင်းကိုတစ်ယောက်ချင်းစီသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
တတိယအချက် - နှိုင်းယှဉ်မှုကဒီကိစ္စမှာမကိုက်ညီပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Firefox မှာ extensions များစွာ install လုပ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ Firefox ကို URL bar ကိုအောက်ခြေမှာထားရှိခြင်း၊ အညွှန်းခလုတ်များကို ညာဘက်, ဘယ်ဘက်ရှိ tabs များ, အဘို့အတိုးချဲ့မှုများကိုအသုံးမပြုပေမယ့်လျှောက်လွှာမှဇာတိတစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မယ်။
စတုတ္ထအချက် - ခင်ဗျားက KDE ၅ လို့ဆိုလိုတယ်ထင်တယ်။ ကောင်းပြီ၊ အခုအချိန်မှာကျွန်တော့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ (5GB RAM ပါ ၀ င်တဲ့) GNOME Shell ကို install လုပ်ပြီး KDE 8 ကို Laptop (4GB RAM ပါ ၀ င်ပြီး) နဲ့ KDE ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်ကို install လုပ်ထားပါပြီ။ သုံးစွဲမှုကဲ့သို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအတူတူပင် application များဖွင့်ထားသောသုံးစွဲမှုကဲ့သို့: Chromium, Keepassx, Dolphin / Nautilus, Synergy, Konsole / Gnome Terminal
KDE5တွင် ၄ င်း၏ bug များရှိနေဆဲဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်လုံးဝအသစ်သောဖွံ့ဖြိုးမှုဖြစ်သည်၊ သို့သော် GNOME တွင်ထိုအရာရှိသည်မဟုတ်လော။
1 - KDE အသုံးပြုသူကသူသည် Gnome ကိုမကြိုက်ဟုပြောရန်သည်ကြက်မတစ်ကောင်သည်ဒေါသထွက်နေပြီးမနက်ခင်းတွင်သီချင်းမသီဆိုခြင်းအတွက်ဘဲအော်ဟစ်နေသည်။
2 - ဤပို့စ်များကိုဖတ်သောအခါ Gnome သည် extension များမရှိဘဲအလုပ်မလုပ်ကြောင်း၊ ၎င်းကို extensions များမပါဘဲနှင့် themes များမပါ ၀ င်သည်ကိုတွေ့ရသည့်အခါကျွန်ုပ်အလွန်အံ့အားသင့်မိသည်။ XD
ငါသည်လည်းသဘောတူသည်။ စားပွဲခုံများမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုလူများမသိကြပါ။ GNOME ကဲ့သို့သောပတ်ဝန်းကျင်သည်ချဲ့ထွင်ခြင်းမရှိဘဲအလုပ်မလုပ်ကြောင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုမရှိသောစသည်တို့သည် ... အဝိဇ္ဇာ၊ Extension မရှိဘဲ GNOME3ကိုသုံးတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်၌၎င်းကိုကျွန်ုပ်ထံတိုးချဲ့မထားပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျွန်ုပ်သည် Fedora တွင်ရောက်ရှိနေသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်လိုအပ်သောမည်သည့် application ကိုမဆို install လုပ်၍ အလုပ်လုပ်ရန်၊ codecs နှင့် full stop ကို install လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အရာကိုမဆိုပြုပြင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်စနစ်ပညာရှင်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်စာရွက်စာတမ်းများ၊ စာအုပ်များ၊ virtualizations နှင့် console များနှင့်အလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်များသောအားဖြင့်သုံးလေ့ရှိပြီးစိတ်ဒဏ်ရာကိုမမြင်နိုင်ပါ။ Gnome2မှ Gnome3သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အပါအ ၀ င်လူအများအားထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာသူ့ကိုအခွင့်အလမ်းများစွာပေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာမှတ်မိသေးတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူယူဆောင်လာတဲ့ဒီအတွေးအခေါ်ကကျွန်တော့်ကိုမယုံကြည်စေခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်ကတည်းကကျွန်တော်သုံးခဲ့တဲ့ KDE ကိုပြန်သွားခဲ့ပေမယ့်ကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။ ၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ၊ ၎င်း၏အသုံးချနိုင်မှုစွမ်းအားကိုကျွန်ုပ်အသိအမှတ်ပြုသည်။ သို့သော်အချို့သူများကဤနေရာတွင်ပြောခဲ့သလိုပင် KDE နှင့်ပြishesနာသည်၎င်းကိုထူးခြားစွာခွဲခြားထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် GNOME ထက်အားနည်းသောစနစ်ကိုဖြစ်စေသည်။ Memory သုံးစွဲမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ Konqueror ပွင့်လင်းစွာဖြင့် KDE သည် ၁.၂ GB သုံးစွဲသည်။ Gnome နှင့် Firefox တစ်ဝက်တွင်။ ထို့နောက် KDE ကိုသင်ခဏတဖြုတ်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ၊ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်စက်ကို reboot လုပ်ပြီးလျှင်တစ်ခါတစ်ရံစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းကိုမေ့ပစ်သည်ဟုထင်ရပါသည်။ ပြီးတော့တကယ်လို့သူက GNOME လိုမျိုးလူမှုကွန်ယက်များနှင့် / သို့မဟုတ်အကောင့်များနှင့် desktop များနှင့်ပြည့်စုံသောပေါင်းစည်းမှုကိုဆန့်ကျင်။ ဘာမှမလုပ်ပါ။ ၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ် desktop ၏ကြီးမားသောခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Gnome တွင်ရှိသည့် desktop နှင့် network များကိုပြီးပြည့်စုံသောပေါင်းစည်းမှုနှင့်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း system သည်စာရွက်စာတမ်းများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ သိုလှောင်မှု၊ အီးမေးလ်များ၊ အကြိုက်ဆုံးများအားစနစ်ကိုအလိုအလျောက်စီမံခန့်ခွဲရန်ပြုလုပ်သည်။ , အဆက်အသွယ်များနှင့်ပြက္ခဒိန်နှင့်အလုပ်များကို။ အံ့သြစရာပါပဲ နောက်ဆုံးတော့ငါ GNOME ကိုပြန်သွားပြီး၊ သူ့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေ၊ သူ့ရဲ့ဌာနခွဲရဲ့အစမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အပြောင်းအလဲတွေနဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာအဲဒါနဲ့ကျွန်တော်ဆက်နေခဲ့တယ်။ တစ်ခုမှာကျွန်ုပ်သည် taskbar၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ minimize or maximize မလိုအပ်ကြောင်း၊ အရာအားလုံးသည်တစ်မိနစ်အတွင်းအပြည့်အဝပေါင်းစည်းနိုင်ပြီးကျွန်ုပ်သည်ဤပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မည်မျှသိမ်းဆည်းထားမည်ကိုသဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ငါပြီးသား, သူတို့ကကွဲပြားခြားနားသော desktop ကိုပါရာဒိုင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပေမယ့်ငါအရင်းအမြစ်များကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌, လက်ရှိ Gnome အများကြီးပိုကောင်းသည်ထင်, ငါသည်လည်းပိုပြီးခိုင်မာတဲ့နှင့်ပိုပြီးဘက်ပေါင်းစုံကြောင်းယုံကြည်, နှင့်သင်တန်းကမေးလ်, ပြက္ခဒိန်များ, အွန်လိုင်းအကောင့်များနှင့်အတူကမ်းလှမ်းပေါင်းစည်းမှုကနေဖြစ်ပါတယ် ငါမြင်ဖူးသမျှအကောင်းဆုံး။
လူတွေဟာဒီ (သို့) အခြားစားပွဲခုံကိုသုံးတာဒါမှမဟုတ်သူတို့မသုံးချင်တာနဲ့တူတာကိုငါအရမ်းသဘောကျတယ်။ တစ်စုံတစ် ဦး ကအသုံးပြုလျှင်၎င်းသည်သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။ လူတို့သည်တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့မုန်းတီးရာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်လူကြိုက်များသည် ဟူ၍ မထင်ပါ။ သူကပြောခဲ့သည်မှာယခုကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်ကိုရေမြှုပ်လိုက်သောအခါသင်ပင်သင်ပြောနိုင်သည်။ ပြီးတော့အားလုံးကပြတင်းပေါက်တွေနဲ့ panel ကိုကိုင်တွယ်ပုံကြောင့်ပဲ။ ဒီတစ်ခါလည်းငါ၌ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာရုံကြောပြit'sနာဖြစ်သော်လည်း Gnome ၏မျက်နှာပြင်ကိုကြည့်ရုံဖြင့်ငန်းသီးများပြန့်ကျဲသွားပြီးကျောရိုးအောက်သို့ကျသွားသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကမင်းရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြproblemနာပါ။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်ကံကောင်းပါစေ။
မရေမတွက်နိုင်သော! ငါ mate desktop ကိုပိုနှစ်သက်ပါတယ်
အမှန်အတိုင်းပြောရရင်သူတို့ဟာအသုံးပြုမှုနည်းလမ်းကိုအများကြီးပြောင်းလဲခဲ့ကြပြီး၊ ကြိုးစားပြီးတဲ့သူကအဲဒီပြwithနာနဲ့ (အလွန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်) တိုက်မိသွားတယ်။ သို့သော်သင်ခဏတာအသုံးပြုသည်နှင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်လာသည်။
ဥပမာအားဖြင့် taskbar တစ်ခုမရှိခြင်း။ ငါ့အိမ်မှာ Gnome Shell နဲ့ windos7 အလုပ်လုပ်နေတယ်။ application တွေကိုပြောင်းလဲဖို့ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုပွင့်ဖို့ငါမောက်စ်ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ခေါ်သွားတာ၊ ငါတုန့်ပြန်မှုမရခဲ့ဘူးဆိုရင်မျက်နှာပြင်မှာရှုပ်ထွေးနေတာကိုငါမမြင်နိုင်ဘူး။ ဒါဟာထူးဆန်းနေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်သင်အဲဒါနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိလာတဲ့အခါအရာဝတ္ထုတွေကိုရှာတွေ့ဖို့တောင်ပိုမြန်တယ်။ task bar xD ကိုကြည့်ရတာနဲ့တူတယ်
ယေဘုယျအားဖြင့်သင်ညွှန်ပြသောအရာများသည်အရသာကိစ္စဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်သဘောတူမည်ဟု Nautilus-Dolphin ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်သည်။ Nautilus အဲဒီမှာဘာမှမရှိဘူး, လင်းပိုင်သူ့ကိုနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရ။
ငါနဲ့အတူတူပါပဲ အခြား system တစ်ခုသို့မဟုတ် environment တစ်ခုနှင့်“ ကိုင်တွယ်ရန်” မလုပ်မချင်း GNOME သည်မည်မျှမြန်ပြီးသိသာထင်ရှားသည်ကိုသင်မသိပါ။ W7 နှင့်လည်းအလုပ်လုပ်ခြင်းကျွန်ုပ်သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာမြင်နေရသည့်အရာများကိုပွင့်လင်းမြင်သာစေရန်ဘယ်ဘက်အပေါ်ညာဘက်သို့ mouse pointer ယူနေသည်ကိုတွေ့ခဲ့ရသည်။
သိုးစားသုံးမှုကဘယ်လိုလဲ။ နောက်ဆုံး gnome ကိုသုံးပြီး 1GB ကိုမျိုချလိုက်တယ်။
gnome-shell, ယေဘုယျအားဖြင့်ငါ့အဘို့, တစ်ပါတ်ကျော်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူ 70MB မှ 180MB အကြားစားသုံး။ ၎င်းသည်များစွာသော GB RAM ပါသည့် PC တွင်ဖြစ်သည်။ ငါကအခြားအကန့်အသတ်ရှိသူများတွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအမြန်စမ်းသပ်မှုတွင်၎င်း၏သုံးစွဲမှုသည် (၅၀ မီလီမီတာအကြား) ပို၍ ပင်ကန့်သတ်ထားသည်။
ပုံမှန် PC တွင် RAM စားသုံးမှုအများဆုံးမှာ web browser ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုရန်အတွက် Chrome သည် 3GB အထိရှိသည်။ Desktop နှင့် တွဲဖက်၍ ဖွင့်ပြီး၎င်းမှတ်ဉာဏ်ကိုများစွာယူသော application တစ်ခုရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။
မှတ်ချက်များကိုဖတ်ရှုခြင်းကျွန်ုပ်သည်လူအချို့သည်နာရီဝက်ကျော် Gnome Shell ကိုမကြိုးစားခဲ့ကြပါ။ ၎င်းသည်ပါရဂူပြောင်းလဲမှုသည်ရုတ်တရက်ပြောင်းလဲသွားပြီး၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။ ပထမတစ်ခုမှာအခြားတစ်ခုကို ထပ်မံ၍ ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ငါအရမ်းနှေးနှေးဖွင့်လျှင်သို့မဟုတ်ပွင့်လင်းသောစာရွက်စာတမ်းများစွာနှင့်အလုပ်မလုပ်လျှင်၎င်းထင်သောလူများရှိသည်။ ၎င်းသည် Gnome Shell ၌မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုသူတို့မတွေ့ရှိနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အရာအားလုံးကိုဖြတ်လမ်းတစ်ခုနှင့်နှစ်ချက်နှိပ်ခြင်း (အများဆုံးဖွင့်ထားသည့်ဆိပ်ကမ်း ၆ ခုသို့မဟုတ် ၇ ခုနှင့်အလုပ်လုပ်သည်၊ PDF (သို့) ၆ ခုထက်ပိုပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်သည်) ကိုအာမခံနိုင်သည်။ browser, mail client နှင့်အမျိုးမျိုးသောစာသားစာရွက်စာတမ်းများ) ။ ပရိုဂရမ်အမျိုးအစားများအလိုက်စုစည်းရန်တက်ကြွသောအလုပ်လုပ်သည့်နေရာများကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အကြားသွားလာရန်၊ ပြတင်းပေါက်များကိုရွေးချယ်ရန်သို့မဟုတ်ပရိုဂရမ်များ / ဖိုင်အသစ်များဖွင့်ရန် SUPER key (ကီးဘုတ်အများစုတွင် Windows) ကိုအထူးအသုံးပြုသည်။
KDE နှင့် Gnome Shell အကြားငါကွဲပြားခြားနားသောဒီဇိုင်းအတွေးအခေါ်၏ခြားနားချက်မှာကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ရသည့်အဓိကခြားနားချက်မှာပထမရရှိနိုင်သည့်ကိရိယာများအားလုံးရှိသည်။ ၎င်းတို့ကိုသင်အသုံးမပြုနိုင်ပါသို့မဟုတ်အသုံးမပြုပါ။ ဒုတိယတစ်ခုမှာသင်လုပ်ကိုင်ရန်အခြေခံများရှိပြီးသင်ကကိရိယာအသစ်များထပ်ထည့်နိုင်သည်။ လိုအပ်သော။
ကောင်းပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၊ Gnome ကိုကျွန်ုပ်မနှစ်သက်ပါ။ ကျွန်ုပ်အတွက်ရိုးရှင်းသည့်ဘုရင် xfce ရှိနေသေးသည်။
ကျွန်ုပ်ကိုထိုနေရာမှပြေးစေသည့်ခလုတ်များ၏ဒီဇိုင်းနှင့်နေရာချထားမှု၌အသေးစိတ်အချက်အလက်များရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Xubuntu XD နှင့်လည်းရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
Faustino Aguilar ဟုသူကပြောသည်
ဤမျှလောက်များစွာသော Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနေရာတွင် Canonical's Unity ကိုအသုံးပြုသည်
Faustino Aguilar ထံပြန်သွားပါ
ငါနေရာတိုင်းမှာဖတ်ခဲ့တဲ့မှတ်ချက်ကတော့ Gnome ဟာ desktop အတွက်မဟုတ်ဘဲတက်ဘလက်တွေအတွက်ရည်ရွယ်တယ်ဆိုတာပါ။ တကယ်တော့ဒါဟာ ၁၀၀% မမှန်ကန်ပါဘူး။ Gnome တွင် touchscreen စွမ်းရည်များ (ပိုမိုလူကြိုက်များလာခြင်း) ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီး desktop ကိုစဉ်းစားနေကြသည်။ သို့သော်၎င်းသည် ၁၀၀% မဟုတ်သေးကြောင်း (Wayland သို့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပျောက်နေသည်) ။ သို့သော်၎င်းသည်လက်တော့သို့မဟုတ်လက်ပ်တော့တစ်ခုအတွက်ကီးဘုတ်ကို အသုံးပြု၍ အဆင်ပြေလျှင်။ ငါအသုံးပြုသောစားပွဲခုံအားလုံးတွင် Gnome သည်ကီးဘုတ်နှင့်အကျွမ်းတဝင်အရှိဆုံးသောသူဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် application များဖွင့်ရန်လွယ်ကူသည်။ (Super + application name + enter)၊ aps အကြားပြောင်းသည်။ ဒါကအနည်းငယ်မှတ်ချက်ပေးတဲ့အလွန်ကြီးစွာသောအားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်
Edgar hdz ဟုသူကပြောသည်
edgar hdz အားပြန်ကြားပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အမြဲအသုံးပြုခဲ့သောအရာသည် GNOME 3.16 တွင်မရှိတော့ပါ။
FILES မှ“ link folder သို့မဟုတ် file” ကိုရရှိနိုင်သကဲ့သို့ရိုးရှင်းပါသည်။
အစဉ်အမြဲငါ partitions ကိုရှိသည်:
/ data (ကျွန်ုပ်၏ဓါတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများစသည်ဖြင့်)
ဒါကြောင့်ငါ့အိမ်မှာ / data / Documents (ဥပမာ) နဲ့ငါ့အိမ်မှာ folder link တစ်ခုအမြဲတမ်းဖန်တီးတယ်။
ကောင်းပြီ, ထိုအခြေခံ option ကိုသွားပြီ!
ပျောက်ဆုံးနေသောပြsolveနာကိုဖြေရှင်းရန်ကျွန်ုပ်၏အခြား Linux (Debian) ကိုကျွန်ုပ်၏ Debian အိမ်သို့ထည့်ပြီးအစောပိုင်းကဖန်တီးခဲ့သောလင့်ခ်များကိုကူးယူလိုက်သည်။
လင့်ခ်များကိုဖန်တီးရန်ရွေးချယ်စရာမှာကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ သင်ဖိုဒါသို့မဟုတ်ဖိုင်အားအလယ်ခလုတ်ဖြင့်ဆွဲယူပြီးသင် link (များ) ကိုလိုချင်သည့်နေရာတွင်ဖြုတ်ပစ်လိုက်ရုံသာဖြစ်သည်။ (ဖိုင်များနှင့်ဖိုင်တွဲများစွာကိုအတူတကွလုပ်ဆောင်နိုင်သည်)
ps: တစ်ခုခုကို graphical interface ဖြင့်မပြုလုပ်နိုင်ပါက terminal မှပြုလုပ်ရန်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအမြဲရှိသည်။
ln -s / data / စာရွက်စာတမ်းများ $ HOME / Documents /
ဤနည်းဖြင့်သင်၏ Documents ဖိုင်တွဲအတွင်းရှိအရာအားလုံးကိုဒေတာအခန်းကန့်၌သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။
nautilus (files) များကိုဖွင့်စရာမလိုဘဲ USB drive ကိုအဆုံးသတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်စကရင်၏အောက်ခြေ (ဘယ်နေရာမှာမဆို) ကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်မျှရွေ့လျားရုံဖြင့် notification bar ပေါ်လာလိမ့်မည်။ USB drive ကိုသာရွေး။ နှိပ်လိုက်ပါ။ အဆိုပါ dismount ခလုတ်ကိုကပါပဲ
ကျနော့်အမြင်အရသူတို့အတွေးအခေါ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့အောင်မြင်နေတယ်။ ပြီးတော့အဲဒါကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကခေတ်မှီ၊ ခေတ်မှီတာမဟုတ်ပါဘူး။ Minimistic interfaces များသည်လှပသော်လည်းပရိုဆက်ဆာပေါ်တွင်ဝန်ကိုလျော့နည်းစေသည်။
သင်၏နိယာမများကို Gnome အားစကားလုံးနှစ်လုံးဖြင့်ဖော်ပြနိူင်သည်။
၄ င်း၏လက်တွေ့ကျမှုသည်သင်ပေါင်းထည့်ချင်သော extension များပေါ်တွင်လည်းမူတည်သည်။
ငါဒီပတ်ဝန်းကျင်ကမ်းလှမ်းသောအရာကိုထက်ပိုတောင်းပါဘူး။ ကျွန်ုပ်သည်ဂရပ်ဖစ်အကျိုးသက်ရောက်မှုများသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်ဆိုပါက Gnome သည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးပတ်ဝန်းကျင်မဟုတ်ပါ။
အတော်များများက shell ကို gnome မှအတွေးအခေါ်များကူးယူ
EasyEDA PCB ဒီဇိုင်းကိုမိနစ်အနည်းငယ်အတွင်း
dd နှင့်အတူ HDD ကိုမြန်နှုန်းတိုင်းတာပါ